Oscar ဆုပေးပွဲရဲ့ ဇကာတင်စာရင်းမှာ သူ့နာမည်မပါလို့ ရှက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ Bradley Cooper - MoviesFan Movie News
Oscar ဆုပေးပွဲရဲ့ ဇကာတင်စာရင်းမှာ သူ့နာမည်မပါလို့ ရှက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ Bradley Cooper
နာမည်ကျော်မင်းသား Bradley Cooper ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးတဲ့အပြင် အဆိုတော် Lady Gaga နဲ့အတူတွဲပြီး ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ A Star Is Born ဇာတ်ကားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့တုန်းက ရုံတင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဇာတ်ကားရဲ့ ကောင်းသတင်းက လူတိုင်းရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ အရမ်းရေပန်းစားသွားခဲ့သလို ငွေကြေးရေးရေးအရလည်း ၀က်ဝက်ကွဲဆိုသလို အောင်မြင်ခဲ့ပါတာကိုလည်း အားလုံး သိပြီးသား နေမှာပါ။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ဂီတလောကကို အခြေခံထားပြီး ဒရာမာ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ A Star Is Born ဟာ အနုပညာအရလည်း အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောနိုင်သေးတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ဆိုင်ရာ ထူးချွန်ဆုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုးက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဆုချီးမြှင့်ပွဲတွေမှာလည်း ဆုအမျိုးမျိုးတွေကို ရရှိခဲ့ကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့လေ။ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တုန်းက Oscar ဆုပေးပွဲအတွက် ဇကာတင်ဆုစာရင်းတွေ ထွက်ရှိလာတဲ့ အခါမှာတော့ Bradley Cooper ဟာ အကြီးအကျယ်ကို ရှက်သွားခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင် ပထမဦးဆုံး ပွဲဦးထွက်အဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ A Star Is Born ဟာ သူ အမျှော်လင့်ကြီး မျှော်လင့်ထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုရဲ့ ဇကာတင်စာရင်းမှာ လုံးဝပါမလာခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
Bradley joined Oprah for her super-soul conversation series! 😍❤️ #BradleyCooper #Oprah
A post shared by Bradley Cooper (@bradleycooper__original) on Feb 5, 2019 at 8:30pm PST
“အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်ဟာ နယူးယောက်ခ်က ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းတချို့နဲ့ ထိုင်နေခဲ့တာ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိဖြစ်တဲ့ Nicole က ကျွန်တော့်ကို မက်ဆေ့ချ် လှမ်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ သူက ဇကာတင် စာရင်းမှာပါတဲ့ A Star Is Born ဇာတ်ကားရဲ့ တခြားဆုတွေအတွက် ကျွန်တော့်ကို ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းလို့ ပြောသွားခဲ့ပေမယ့် ဒါရိုက်တာဆု မပါတာကိုတော့ ထည့်ပြောမသွားခဲ့ဘူးဗျ။ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားမှာ စိုးလို့နဲ့တူတယ်လေ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တော်တော်လေးကို ပြန်ရှက်မိသွားတာပါပဲ”
အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Cooper ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တုန်းက နာမည်ကျော် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Oprah Winfrey ရဲ့ Oprah’s SuperSoul Conversations ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အဲဒီလိုတွေ ရင်ဖွင့်ပြောပြသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
😍🏆 “A Star Is Born” just received 8 Oscar nominations including Best picture, Best leading actor and Best Leading actress. — #AStarIsBorn #BradleyCooper #LadyGaga #TheOscars
A post shared by Bradley Cooper (@bradleycooper__original) on Jan 22, 2019 at 6:35am PST
တကယ်တော့ A Star Is Born ဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၉ အော်စကာဆုပေးပွဲအတွက် ဇကာတင်ဆုစာရင်းမှာ ၈ နေရာတောင် ပါနေခဲ့တာပါ။ အဲဒီထဲက Best Actor, Best AdaptedScreenplay နဲ့ Best Picture ဆိုတဲ့ ဆု ၃ မျိုးရဲ့ ဇကာတင်စာရင်းတွေမှာလည်း Cooper တစ်ယောက်တည်းက ပါ၀င်နေခဲ့သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း Cooper အနေနဲ့ တခြားဆုတွေထက် သူပထမဦးဆုံး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေးမှာ ဒါရိုက်တာဆုကိုပဲပိုပြီး မက်မောတာမို့ အခုလိုတွေ ရင်ဖွင့် ပြောပြသွားခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Bradley Cooper felt embarrassed after he found out he didn't receive an #Oscar nomination for Best Director. But for the record, we're going to be thinking about this film foravery long time. Link in bio for all of his comments on the snub. (📷: Warner Bros.)
A post shared by E! News (@enews) on Feb 6, 2019 at 7:46am PST
ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့ Idol အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေခဲ့ကြတာတွေကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း Cooper ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ကျရင် Los Angeles က ဟောလီးဝုဒ်ရပ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ Dolby Theatre မှာ ကျင်းပတော့မယ့် ၉၁ ကြိမ်မြောက် Oscar ဆုပေးပွဲကြီးကို မပျက်မကွက် တက်ရောက်ရမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူနဲ့ Gaga တို့တွေဟာ အဲဒီပွဲမှာ အတူတွဲပြီး A Star Is Born ဇာတ်ကားထဲက Shallow ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို သီဆိုဖျော်ဖြေကြရမှာမို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ။
Award, celebrity news, Drama, Hollywood, Musical, Nominations, Oscar
Previous Post: Season 10 ကိုလည်း မကြာခင်မှာ ကြည့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ The Walking Dead
Next Post: Social Media ပေါ်ကို ဦးဦးဖျားဖျား ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Game of Thrones: Final Season ပုံရိပ်များ